[VIDEO] Peluk Islam Setelah Selesai Ceramah Umum PAS Kawasan Balik Pulau
Please, kindly do not start another Buddhist Christian Religious Conflict
Rakhines are blaming back the Myanmar Military Government for starting the anti-Rohingya riots
Dakyah UMNO, Penghulu Parti Syaitan
Astro TVIQ Oh My English! Wreck or wreak havoc?!
Subway Ramadan Meal: Subway SS2, sandwiches
Pistol Itu Milik Sykt Keselamatan & Pegawai Terbabit Dibenarkan Bawanya Semasa Bertugas
Fitting Finale To Paralympics 2012
Companies Use Unlock My Password Software to Keep Their PCs up and Running
Crafting Disciplines in Guild Wars 2
Do I need an alt in Guild Wars 2?
Guild Wars2Achievements System
Exactly how do I Do away with Herpes The most effective Means To QuitaHerpes Episode Is To Accumulate The Immune System Herpes Kind2Treatment
Cooking and Crafting – Something you shouldn’t neglect.
Posted: 09 Sep 2012 09:00 AM PDT
Code Red | 31 August 2012
military dog named Gina is recovering from post-traumatic stress
disorder afterasix-month tour in Iraq, where
Posted: 09 Sep 2012 10:09 AM PDT
Posted: 09 Sep 2012 06:16 AM PDT
Please, kindly do not start another Religious Conflict.
Myanmar could be ruined.
We all must be united and work for the progress of all the people of Myanmar.
I have NO HEART to translate this complaint letter to the President U Thein Sein byamonk attacking the Christians in Burma or Myanmar.
နှစ်ဘာသာငြိမ်းချမ်းရေး အလေးပေးဆွေးနွေး အရေးယူကြပါ
by Agga Dhamma on Saturday, September 8, 2012 at 3:59pm ·
နေ့စွဲ။ ။ ၁၂-၆-၂၀၁၂။
အကြောင်းအရာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာအား စော်ကားပုတ်ခတ်သူများနှင့် ၎င်းတို့အသုံးပြုသောကျမ်းစာများ၏ ဘာသာရေးသွေးဆောင်သိမ်းသွင်းစော်ကားမှုများအား တင်ပြတိုင်ကြားခြင်းကိစ္စ
၁။ မြန်မာနိုင်ငံသည် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ၍တည်တံ့ခဲ့သောနိုင်ငံတော်ဖြစ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံ၏မင်းကောင်းမင်းမြတ်မှန်သမျှတို့သည်လည်း နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခဲ့ကြပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့၏ သမိုင်းပေးတာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ သွေးကပြောသောဘာသာဖြစ်သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာမှတစ်ပါး အခြားမည်သည့်ဘာသာမှနေရာ မယူနိုင်ခဲ့
ကြပေ။ အမျိုးဖျက်ခံရခြင်း၊ ကျွန်ပြုခံရခြင်း၊ ဘာသာဖျက်ခံရခြင်းတို့သည် ဗမာလူမျိုးတို့၏ဝံသာနုရက္ခိတတရားတို့ကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခံရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အမွေအနှစ်ဖြစ်၍အခြားဘာသာများ လာရောက်သာသနာပြုခံရခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်နေပေတော့သည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သည် မြန်မာလူမျိုးများအတွက် အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုကို အစဉ်ရှေးရှုတည်တံ့ခိုင်မာခဲ့သောနိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
၂။ ယခုအခါ သမိုင်းလက်ကျန်အဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့သော ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ကျွန်ပြုအုပ်စိုးမှု၊နိုင်လိုမင်းထက် ပြုမူစော်ကားမှုတို့ဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာ၊ သာသနာကို လွှမ်းမိုးစော်ကားမှု၊ သိမ်မွေ့စွာရက်စက်မှုပြုနေသော မသိမသာအနေအထားမှ သိသိသာသာ အခြေအနေဆိုးများကို တွေ့မြင်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ပြလိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံဖြင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းခဲ့သော နိုင်ငံတော်ကြီးတွင် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးချုပ်ကိုင် ကျွန်ပြုခဲ့သည့် ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု အကြောင်းပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု စီးဆင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ထောက်ပံ့ပေးကမ်းမှုကို ရှေ့တန်းတင် အယောင်ဆောင်၍သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာပြုစော်ကားမှုများ၊ ဘာသာဖျက် လက်ကိုင်တုတ်များကို အသုံးချ၍ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ရပ်ကွက်အေးချမ်းသာယာရေးတို့ကို နှောင့်ယှက်ပျက်စီးစေသည့်အပြင် လူမျိုးရေးလှုံ့ဆော်မှု၊ ဘာသာရေး ဖျက်ဆီးမှုတို့ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိနေရပါသည်။
၃။ အသားထဲက လောက်ထွက်သည့်အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ရဟန်းသံဃာတို့သည် ကောင်းမွန်သောဘဝအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည့်စုံကြွယ်ဝသော ဘဝအတွက်လည်းကောင်း ပြောင်းရွှေ့ယုံကြည်ပါသည်ဟုဖြစ်စေရန် ပြည်တွင်းမှတစ်မျိုး၊ ပြည်ပမှတစ်ဖုံ၊ ခေတ်မီသောနည်းလမ်းမျိုးစုံကိုသုံး၍ Internet website များမှ ကမ္ဘာသို့ ဖြန့်ချိလျက်ရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
၄။ Rev ပိုင်စိုး (ဉာဏ်ဦးဟန်) သည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဟောပြောခဲ့သော ကံ ကံ၏အကျိုး ဟူသော
ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ အခြေခံယုံကြည်ခြင်းတရားကို ရိုက်ချိုးခုတုံးလုပ်၍ ဘာသာရေး ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ဟောပြောခြင်းအား ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရည်ဝိပဿနာရိပ်သာ၌ (၁-၈-၂၀၁၁) နေ့တွင် ဆရာပိုင်စိုးအား ခေါ်ယူ၍ ဗုဒ္ဓ
ဘာသာလူကြီးမင်းများနှင့် အပြန်အလှန် တင်ပြဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြရာ ၎င်းကိုယ်တိုင်က ပြုပြင်ရန် လက်ခံ
နားလည်ပါသည်ဟူ၍ ဆွေးနွေးမှုများ အောင်မြင်ခဲ့ကြပါသည်။
၅။ နောက်တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာသုံး ပါဠိစကားလုံးများအား ဆွဲယူအသုံးပြုခြင်းနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသဘောတရားများအား ရောယှက်အသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်၍ မည်သည့်ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများဆီသို့ မတိုင်ကြားခဲ့ခြင်းသည် ဘာသာပေါင်းစုံ ညီညွတ်ရေးအတွက်
အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ပေါ်စေလို၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Rev ပိုင်စိုး အပါအဝင်ဦးကံထူး၊ S ဂွန်အောင်စသော ဘာသာပြု (ဧဝံဂေလိ) သတင်းကောင်းဟူ၍ အင်တာနက်မှသော်လည်းကောင်း၊အသင်းတော်တွင်း ကန့်သတ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ချိခြင်းဖြင့်
လည်းကောင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများမှလည်းကောင်း၊ Internet မှလည်းကောင်း ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေသည်ကို တွေ့မြင်နေရပေသည်။
၆။ ယခုတစ်ဖန် S ဂွန်အောင် (ခေါ်) ကိုကိုလွင်၏ သက်သေခံ VCD သည် www.mcathailand.comလိုင်းမှ အင်တာနက်တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ကိုးဘွဲ့ရခြင်း၊ လင်္ကာရဘွဲ့ရခြင်း၊ ဝဋံသကာဘွဲကို နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲမှ ချီးမြှင့်မရသောဘွဲ့အား ချီးမြှင့်သည်ဟု လိမ်လည်ခြင်း၊ M.A ဘွဲ့ရခြင်း၊ Ph.d ဘွဲ့ရခြင်း၊ RITကျောင်းပြီးခြင်းစသော ဂုဏ်ထူးများဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်များသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ပြောင်းလဲသည့်သဏ္ဌာန်တင်ပြစည်းရုံးရာတွင် မိဘအား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ သတ်သည်ဟု လူမျိုးရေးတိုက်ခိုက်မှု၊ခရစ်တော်၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖယ်၍ ဘုရားတည်သည်ဟု ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှု၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများမှ ဦးဆောင်သည်ဟု နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအား အကြည်ညိုပျက်စေမှု၊ ပိဋကတ် (၃)ပုံတွင် မပါဝင်သည့် မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်အား လိမ်လည်၍ ပါဠိစာများဖြင့် ယုတ်မာစွာ အသုံးချမှု၊ ဆရာသမား၏ ရေးသားသော ကျမ်းစာအုပ်ကို ကိုယ်တိုင်ရေးလေဟန် လိမ်ညာတင်ပြမှုစသည်ဖြင့် အနန္တောအနန္တငါးပါးတို့အား ထိပါးတိုက်ခိုက်ရုံမကဘဲ ပါဠိစာပေကို ဖျက်ဆီးပြီး ကမ္ဘာသိအောင် လုပ်ခဲ့ကြသည့်လုပ်ရပ်များသည်ဗုဒ္ဓဘာသာထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် မခံမရပ်နိုင်အောင် လွန်စွာမှ ရှက်ဖွယ်လိလိ ဖြစ်ခဲ့ရပါသဖြင့်အရေးယူပေးနိုင်ပါရန် လေးစားစွာ တိုင်ကြားအပ်ပါသည်။
၇။ အထက်ပါ VCD အခွေအား ရရှိပြီးသည့်နောက် မိမိသာကြောင့်ကြမဲ့နေခဲ့လျှင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၂၀) နီးပါကကဲ့သို့ လိမ်လည်လှည့်ဖျား သာသနာပြုခဲ့ခြင်းသည် ဆက်လက်ရှင်သန်၍ လောက၏ယုတ်မာမှုများသည် ကမ္ဘာတည်သွားနိုင်ပါသည်။ လိုက်လံစုဆောင်းလေ့လာသောအခါ လိမ်လည်စော်ကားတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခြင်းသည် ဘူးပေါ်သလို ပေါ်လာခဲ့ရပါသည်။ ယခုမှအမှန်သိ၍ ဝန်ခံကြမည်ဆိုသော်လည်းပြဿနာတွင် အလျှော်ပေး အစားထိုးတောင်းပန်၊ ပြစ်ဒဏ်ခံယူယုံဖြင့် ကျေအေးရမည့် ပြဿနာများမဟုတ်ကြပါ။ အသိဉာဏ်နှင့်ဆိုင်သော၊ ဘဝသံသရာဖြင့်ဆိုင်သော မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်အရာဖြင့်ဆိုင်သောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအရ အပ္ပါယ်လေးပါးသို့ ကျရောက်ရာကိစ္စဖြစ်သကဲ့သို့ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအမြင်အရကန့်နှင့်လောင်သော ထာဝရဘုံနေရာသို့ ရောက်ရှိကြမည့်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအားလုံးအား ကောက်ချက်ဆွဲရသော် -
(က) ကျွန်ပြုအုပ်ချုပ် နေရာချဲ့ထွင်ခဲ့သော ဘာသာတရားဖြစ်နေခြင်း၊
(ခ) မဖွံ့ဖြိုးသောဒေသများ၊ ရိုးရာယုံကြည်မှုများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်းပြဘာသာပြုသက်သက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်း၊
(ဂ) ဆင်းရဲမှုအကြောင်းပြ ထောက်ပံ့ပေးဘာသာပြုခြင်းစသည့် ရက်စက်ယုတ်မာမှုအသီးအပွင့်များအဖြစ် ကျန်ရစ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်း
သားပေါင်းစုံ စုပေါင်းနေထိုင်သော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဖြစ်သည့်အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာကချင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာချင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကယားစသည်ဖြင့် လူမျိုးစု
များကြား ဘာသာခြားသွေးထိုးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း (ဓားမဦးချ ကိုးကွယ်ခဲ့သော) လူမျိုးစုများ ယခုတိုင်ရှိနေကြခြင်းသည် ဘာသာပြုသွေးခွဲခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
၈။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှလုံးသားသည် ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး လက်ကိုင်ထား၍ ဥပက္ခာပြုနိုင်ကြသဖြင့် ရှင်သန်နေထိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ မေတ္တာတရား ရှေ့တန်းတင်သော ဘာသာအဖြစ် အများထင်သာအောင်ပြုလုပ်နေပါသော်လည်း မုန်းတီးမှု၊ ရက်စက်မှုတို့သည် ၎င်းတို့ဘာသာပြု ကျမ်းစာအုပ်များ၏ အခြေခံအချက်များစွာအဖြစ် သွေးထိုးထားခဲ့ပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားချင်း ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတွေ့လျှင်တောင် မကြည့်ချင်မမြင်ချင်အောင် သွေးထိုးစေကာ အတူနေထိုင်သွားခြင်းဖြင့် ရပ်တည်နေရပါသည်။ ကမ္ဘာနှင့်တစ်ဝှမ်းတွင်စစ်ပွဲတွေ၊ ဖောက်ခွဲမှု၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတို့သည် အခြားဘာသာရေး အခြေခံယဉ်ကျေးမှုတို့လွှမ်းမိုးသော
၉။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ S ဂွန်အောင် ဟောပြောခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်
(က) ဗုဒ္ဓပိဋကတ်တော်ကို လှည့်ဖျားလိမ်လည် ကျူးကျော်စော်ကားခြင်း၊
(ခ) တရားတော်အား စော်ကားပုတ်ခတ်ခြင်း (ဘုရားမဟောခဲ့သည်ကို ဟောခဲ့လေဟန်၊
(ဂ) သံဃာတော်အပေါ် ယုတ်မာခြင်း (မိမိဆရာသမား ရေးသားသောကျမ်းအား သူရေး
သားခဲ့လေဟန် တင်ပြခြင်း၊ မိမိမရခဲ့သောဘွဲ့များအား ဂုဏ်ဖော်၍ ရွှေကျင်ကျောင်း
တိုက်ထဲတွင် ခရစ်ယာန်ဘုရား၏ ချီးမြှောက်မှုကို ခံရခြင်းဟု ယုတ်မာစွာ ဂုဏ်ဖော်
(ဃ) မိဘဆရာတို့အပေါ်ပြစ်မှားခြင်း(ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားပူဇော်ရေးသားသောခန္တီလက်သုံးမြတ်သောဘုန်းဆောင်းပါးတွင် မိမိအတွက် ရေးသားသည့်ဝတ္ထုဟု လိမ် လည်ခြင်း၊ကျောင်းဒကာကျော်ဝင်းအားမနုဿကျော်ဝင်းဟုလိမ်လည်ခြင်း၊ မိခင်ကိုပြစ်မှားစော်ကားပြီး ဖခင်အား ဓါးဖြင့်ထိုး၍ ကားပါမီးရှို့သတ်ဖြတ်ခြင်းဟု လိမ် ညာ ပြောဆိုခြင်း)
(င) သူတစ်ပါးယုံကြည်ချက်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာက ဖျက်ဆီးလေဟန် (ခရစ်ယာန်ဆုတောင်းတောင်မှ ခရစ်တိုင်အားဖျက်၍ နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တို့က ဘုရားတည်သည်ဟူ၍ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခကို ဖန်တီး၍ နိုင်ငံတော်ကို ပျက်စီးစေရန်လုပ်ကြံခြင်း) စသည်ဖြင့် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်မဆိုလိုဘဲ (ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို အဓိကမပြောလိုပါ) ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်အားဖြင့်သာ တင်ပြလိုပါ သည်။
(က) ပါဠိစာပေညှပ်၍ လိမ်လည်ပြီး ယုတ်မာစွာ သာသနာပြုနေကြခြင်း
(ခ) ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေရန် ဘာသာပြုကျမ်းတွင် ပါဝင်နေခြင်း
(ဂ) မိမိတို့ သာသနာတည်တံ့စေရန် သာသနာအတွင်းသာ နေထိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲဘာသာပြု (ဧဝံဂေလိ) လုပ်၍ နိုင်ငံတော်အား ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မျက်နှာငယ်
အကြည်ညိုပျက်စေရန် ချမ်းသာသော ဘာသာတူ တိုင်းပြည်များထံမှ တောင်းရမ်းစားသောက် ကိုယ်ကျိုးသုံး၍ နိုင်ငံတော်အား ရောင်းစားနေခြင်း
(ဃ) ကမ္ဘာ့ထောက်ပံ့ပေးကမ်းခြင်းများသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွက်သာ ဆိုလျှင် ၎င်းတို့ဘာသာဝင်တို့အား ၎င်းတို့နိုင်ငံသို့သာ ခေါ်ယူကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခွင့်ပြုပေးစေလိုပါသည်။
(င) လူသားခြင်း စာနာမှုဟုပြောပြီး ဘာသာပြုနေကြသော အမျှော်မကင်းသောအလှူတော်ထမင်းအား နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ငြင်းပယ်စေလိုပါသည်။
၁၁။ အချုပ်အနေဖြင့် တင်ပြလိုသည်မှာ -
ယခုဖြစ်ပေါ်သော အခြေအနေများကို သက်ကြီးခရစ်ယာန်ဆရာများနှင့် ဓမ္မပညာနားလည်သူများ၊(MCC) မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ (အသင်းတော် ၁၄ ပါး) ပါ ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓ၊ ဓမ္မအတွေ့အကြုံမရှိဘဲ တိုင်းရင်းသားများမှဖြစ်သော ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များသာ ဖြစ်ကြပါသည်။ တွေ့ဆုံပွဲ၌ ခိုင်ခိုင်မာမာတုန့်ပြန်မှု မပေးနိုင်၊ တိကျသော ဆုံးဖြတ်ချက်မပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့က လွန်စွာမှ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြရပါသည်။ သူခိုးက လူလိုဟစ်ဆိုသကဲ့သို့ မဖြစ်စေရန်နှင့် နိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီကို အကြောင်းပြ၍ ဘာသာရေးဒီမိုကရေစီအဖြစ် လွတ်လပ်စွာ စော်ကားပုတ်ခတ်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်စေလိုပါ။
(က) မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ (MCC) တွင် အသင်းတော် (၁၄)ပါးသာရှိပြီး ကျန်သောခရစ်ယာန်အသင်းတော် (၂၇ ပါးခန့်) သည် ဘာသာရေးညီညွတ်မှုကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေခြင်းဖြစ်နေပါသည်။ ဓမ္မသတ်ဖြင့် ညှိနှိုင်းစည်းရုံး၍
မရနိုင်လျှင် ရာဇသတ်ဖြင့် အရေးယူပေးစေလိုပါသည်။
(ခ) မည်သည့်ဘာသာဝင်များမဆို လူသားအချင်းချင်း စာနာနားလည်မှုရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခြင်းကို မထိခိုက်စေလိုပါသော်လည်း လွန်ခဲ့သော နှစ် (၂၀၀) ခန့်မှ ပြုစုခဲ့သော နှစ်ကျမ်းတွဲ (Bi+ble) ကို သမ္မာ ဟူသော ပါဠိစကားလုံးများအား စတင်ရောနှောအသုံးပြု၍ ဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်ကွယ်ရေးအခြေခံမူကြီး ဖြစ်နေပါသည်။ အနာဂတ္တိ ကျမ်းများအဖြစ် ပါဠိစာများအဖြစ် ရောနှောလျက် ရေးသားထားခဲ့ပါသည်။
၁၃။ မူလဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏စကားမှ အားသာချက်များယူ၍ အသုံးချခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအတွဲအမှတ် (၂၀) တွင် သုတ္တံကျမ်းဟု ပါရှိထားပါသည်။ ပိဋကတ်သုံးပုံပါ သုတ္တံဟု ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်ရှေ့ဖြစ်ဟောကျမ်းများကို အတွဲအမှတ် (၂၃ မှ ၃၁) အထိဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အတွဲအမှတ် (၄၅ မှ ၆၅) ထိ မိန့်မှာချက်များကို သြဝါဒစာဟု ပါဠိစာများ အသုံးပြုခဲ့ပြီးအတွဲအမှတ် (၆၆) တွင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းဟုပင် ပါရှိခဲ့ရာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ဗျာဒိတ်များဖြင့် ရောနှောလျက်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
၁၄။ ယခုအခါ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသော ကျမ်းကြီးကြောင့် အထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်စေသော ကျမ်းစာများကို ပြင်ဆင်နိုင်သည့်အခြေအနေတွင် ရှိနေပါသည်။ မကြာခဏ ကျမ်းဟောင်းအတိုင်း ရိုက်နှိပ်၍ အသုံးပြုနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဖန်ဆင်းရှင်၊ ထာဝရရှင်သန်သော အရှင်သခင်၊ ကယ်တင်ရှင်ဟူသော ဂုဏ်တို့အား နိမ့်ပါးစေသည့် မဟာလူသားအသိဉာဏ်ဂုဏ်ထူးရှင်အား ခေါ်ဝေါ်သော ဗုဒ္ဓဟူသောပါဠိ မှဆင်းသက်လာသည့် (ဘုရား) အမည်နာမသည် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများ၏ ကိုယ်ပိုင်နာမ်စားသာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်ယာန်ဓမ္မတက္ကသိုလ်များတွင် လေ့လာရန် ဗုဒ္ဓတရားတော်များ (MICT ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းပြဋ္ဌာန်းချက်) ဦးကိုကိုနိုင် (ဓမ္မစရိယ၊ ဓမ္မဝိဇ္ဇာ) ရေးစာအုပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့်အတိုင်း (ဗုဒ္ဓ – ဗုဓါး – ဘုရား – ဖရား)သည် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ သုံးစွဲသည့် အသိဉာဏ်ဟူသောစကားသာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန် (သမ္မာ
ကျမ်း) နှစ်ကျမ်းတွဲတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ဘုရားဟူသော စကားများအားလုံး အသုံးပြုခြင်းအား (လုံးဝ)လုံးဝ မပြုလုပ်သင့်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ဘုရား ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ကိုးကွယ်သည့် (ဖန်ဆင်းရှင်၊ ကယ်တင်ရှင်၊ ထာဝရသခင်) အရှင်သခင်၏ဂုဏ်အား နိမ့်ပါးစေပါသဖြင့် လုံးဝအသုံးပြုရန် မလုပ်သင့်ပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ အသုံးပြုသော Bible ကျမ်းတွင် ဖန်ဆင်းရှင်၊ ကယ်တင်
ရှင်၊ ထာဝရသခင်အရှင်မြတ်၏ အမည်အစား အခြားမည်သည့်အမည်ကိုမှ မသုံးရဟု ကျမ်းအလိုအရ ပါရှိပြီးအသုံးပြုလျှင် ကျိန်ခြင်းနှင့် ကန့်နှင့်လောင်သော ထာဝရဘုံသို့ ရောက်ရှိရမည့်အကြောင်းကို ပါရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ဗုဒ္ဓဘုရား၏ ဘုရားဟူသောစကားအား သတ္တိရှိရှိ အသုံးပြုခဲ့ခြင်းသည်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကရှုံ့ချကန့်ကွက်လိုက်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဟူသည် ဂျူးဘာသာကို မှီငြမ်းထားပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဟူသည်လည်း ခရစ်ယာန်ဘာသာကို မှီငြမ်းပြုသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ သို့သော်အစ္စလာမ်ဘာသာသုံးကုရ်အာန်မြန်မာပြန်ကျမ်းတွင် ဘုရားစာလုံးအား လုံးဝအသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။
ဥပမာ – အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် (အလ္လာဟ်) အရှင်သူမြတ်အား မည်သည့်ဘာသာရေးစာအုပ်တွင်မှ ရောယှက်အသုံးချခြင်း၊ ဆင်တူအသုံးချခြင်းခွင့်မပြုဘဲ ခရစ်ယာန်ကျမ်းတစ်ခုတွင် အသုံးပြုခဲ့မိခြင်းကြောင့် တိုက်ပွဲများ၊ သတ်ပွဲများ ဖြစ်ခဲ့ပြီး သွေးချောင်းစီး၍ ဝန်ချတောင်းပန်နှုတ်ပယ်ပေးခဲ့ရဖူးပါသည်။အစ္စလာမ်တို့၏ မြန်မာပြန်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်တွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကလွဲ၍ အခြားစကားလုံး မသုံးစွဲပါ၊ ထိုနမူနာအားယူ၍ (Judson) ဆရာ ယုဒသာန် ရေးခဲ့သော ဤကျမ်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာအား လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၀၀) နီးပါးက ဘာသာရေးလိမ်လည်မှုကြီးဖြစ်ပါသည်။သမ္မာကျမ်းထဲတွင် ပါဝင်သော အဓိကမူကြီးဖြစ်သည့် ပညတ်တော် (၁၀) ပါးအရ ကြည့်လျှင်လည်း ဘာသာဖျက်သူအဖြစ် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ထွက်မြောက်ရာ (၂၀း၃)၊ ထွက်မြောက်ရာ (၂၀း၇) တို့တွင် ဖန်ဆင်းရှင်၏အမည်အား "သင်၏ဖန်ဆင်းရှင်သခင်၊ ထာဝရအရှင်မြတ်၏နာမတော်ကို မုသားဖြင့် မမြွက်ဆိုနှင့်၊ ခွင့်မလွှတ်တတ်သောသခင်ဖြစ်သည်။"(King James Version) EXODUS 20:3၊ EXODUS 20:7 ဖြင့် ယှဉ်တွဲလေ့လာလျှင် ထင်ရှားစွာ တွေ့နိုင်ပါသည်။ GOD is creator. BUDDHA is guide. အခြားအမည်မပြောင်းရ၊ မရှိခိုးရဟူသည့် သဘောဖြင့် ပါရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဆရာယုဒသာန်၏အကြံမှာရောနှောရှုပ်ထွေးစေခြင်းဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခရစ်ယာန်ဘာသာအထဲ သွတ်သွင်းပစ်ရန် ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပြီးခရစ်ယာန်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ရေးပင် ဖြစ်ပါသည်။ ရောနှောပုတ်ခတ်စော်ကားနှောက်ယှက်၍ပစ္စည်းသက်သေအဖြစ် (Bible) ကျမ်း၊ လူသက်သေအဖြစ် ဘိုကပြားအမည်များဖြင့်တွေ့မြင်ရပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအားဖျက်ဆီးခဲ့သည်မှာလွန်စွာဝမ်းနည်းဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆရာတော်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များတို့သည် မိမိဘာသာကိုသာ အဓိကဂရုစိုက်အာရုံပြုခဲ့ကြသဖြင့်အခြားဘာသာဝင်များမှနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်းတို့အားကြောင့်ကြမဲ့နေခဲ့ကြခြင်းသည် မိမိဘာသာလျှင်အမြတ်ဆုံးဟု ယုံကြည်သက်ဝင်မှုကြောင့်သာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ပိဋကတ် (၃) ပုံကျမ်းများနှင့် မြန်မာဘာသာပြန်ကျမ်းများတွင် (God) ဟူသော စကားစုများ လုံးဝအသုံးချခြင်းမရှိဘဲ သဘောတူသည့် ဣဿရိယနိမ္မာနဝါဒဟု ပါရှိပါသည်။ သို့သော် ဆရာယုဒသာန် ပြန်ခဲ့သော ခရစ်ယာန်ဘာသာကျမ်းတွင် မြန်မာဣဿရိယဗေဒစကားလုံးသုံးစွဲခြင်း လုံးဝမတွေ့ရမှုကိုလည်း အံ့သြစွာ တွေ့ရပါသည်။
၁၅။ မိမိခံယူချက်ကဲ့သို့ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ မြင့်မောင် (ကွယ်လွန်) ကလည်း အသင်းတော်တွင်း ကန့်သတ်ဟု ထုတ်ဝေသောစာအုပ် (ပျောက်ဆုံးခဲ့သော ယေရှုဒေသနာကျမ်းတစ်ခု) (The LostGospel Q The Original Sayings of Jesus) တွင်ပါရှိသော စာအချို့ကို တင်ပြပါမည်။
၁၆။ ကျွန်တော် တွေ့ရှိခဲ့သောအချက်တစ်ခုမှာ မြန်မာဘာသာပြန် ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာ ခေတ်ကုန်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် မြန်မာစာပေနှင့် အနှစ်လေးဆယ်မျှ ဝေးကွာခဲ့ရသော်လည်း အရေးအသား၌သာလျှင် ခက်ခဲမှုရှိသည်။ မြန်မာစာဖတ်၍ နားလည်မှုသည် မပျောက်ခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့်လည်း လွန်ခဲ့
သော အနှစ်နှစ်ရာခန့်က ဆရာယုဒသာန် ဘာသာပြန်ခဲ့သော သမ္မာကျမ်း ခေတ်ကုန်နေပြီဆိုသည်အား သိရန်မခက်ခဲပေ။ ကျွန်တော် ဤကျမ်းပိုက်များ ဘာသာပြန်စဉ် ကိုးကားရန် မြန်မာဘာသာပြန် သမ္မာကျမ်းအားအဖန်ဖန် ဖတ်ရှုခဲ့ရသည်။ မြန်မာစကားပင်ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာလူမျိုး နားမလည်နိုင်သောစကားများ တွေ့ရသည်။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများသည် ဤသမ္မာကျမ်းအား နားလည်လို၍ ဖတ်သော်လည်း နားမလည်နိုင်ဟု ပြောဆိုသည်အား ကြားဖူးသည်။
၁၇။ လူတစ်မျိုး၏စကားသည် အနှစ်ငါးဆယ်ကြာလျှင် အချို့စကားဟောင်းများ ပျောက်ကွယ်၍အချို့စကားသစ်များ ပေါ်ပေါက်သည်ဟု စာပေပညာရှင်များ ဆိုရိုးရှိသည်။ ထိုအသိကြောင့် အနောက်နိုင်ငံများ၌ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် သမ္မာကျမ်းစာအား အဖန်ဖန် ဘာသာပြန်ဆိုကြသည်။ မြန်မာခရစ်ယာန်များသည် ဆရာယုဒသာန် ဘာသာပြန်သော သမ္မာကျမ်းနှင့် နှစ်သိမ့်ကျေနပ်နေသည်မှာ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာ့ငါးဆယ်ကျော်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ခေတ်ကုန်နေသည်အား မသိ၍လည်းကောင်း၊ မျက်စိပိတ်ထား၍လည်းကောင်း၊ ဆရာယုဒသာန်အား လေးစားရိုသေ၍လည်းကောင်း၊ အပြင်လောကအား မေ့ထား၍လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်များထဲ၌ မြန်မာကျမ်းစာအား တစ်ဖန်ဘာသာပြန်ရန် မကြိုးစားခဲ့ပေ။
၁၈။ အသက်မရှင်လျှင် သေဖို့ပင်ရှိတော့သည် ဟူသော စကားနှင့်အညီ မြန်မာခရစ်ယာန်များသည်မိမိတို့၏အသင်းတော်အား အသက်မရှင်စေလျှင် မကြာမီ အသင်းတော် သေဖို့ပင်ရှိတော့သည်။ မိမိလက်၌ကိုင်၍ တရားဟောရသောကျမ်းစာသည် အဓိပ္ပါယ်မပေါ်လျှင် အဘယ်အဓိပ္ပါယ်ရှိမည်နည်း။ မြန်မာကျမ်းစာတစ်ဖန် ဘာသာပြန်ရေးသည် မြန်မာအသင်းတော်အဖို့ သေရေးရှင်ရေးကိစ္စဖြစ်ပေ၏။
၁၉။ အထက်ပါ တင်ပြချက်သည် ခရစ်ယာန်ဆရာတစ်ဦး၏ နိဂုံးတွင်ဖော်ပြသော အမြင်ဖြစ်သကဲ့သို့ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာလေ့လာမှု အားနည်းခြင်းကြောင့် နားလည်မှုအားနည်းကာ မိမိလိုသလို မှန်းယူရမ်းယူ သုံးစွဲခဲ့ခြင်းကြောင့် ကြီးမားသော မှားယွင်းမှုများအဖြစ် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဗုဒ္ဓဘာသာအား နားလည်ပါသော်လည်း မိမိတို့ထာဝရသခင်၏ ဂုဏ်မြင့်စေရန် ရောယှက်စွဲယူ၍ ယုတ်မာစွာအသုံးချ ပြီးထာဝရသခင် ဖန်ဆင်းရှင်အား ကိုးကွယ်စေလိုမှု လွန်ကဲသောဆန္ဒကြောင့် ဖန်ဆီးရေးသားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ပါဠိစာပေနှင့် ပါဠိသတ်မြန်မာစကားများအားနှောက်ယှက်အသုံးမပြုနိုင်ပါရန်နှင့် အသုံးပြုခဲ့သောစာအုပ်များမှ အမြန်ဖယ်ရှားပေးပါရန် အထူးတိုက်တွန်း တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
၂၀။ S ဂွန်အောင်ကဲ့သို့ မိမိတစ်ဦးတည်း၊ တစ်ဖွဲ့တည်း၊ တစ်သင်းတည်း၊ ဂိုဏ်းတစ်ခုတည်း၊တစ်ဘာသာတည်း ကောင်းစားရေး၊ ကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက် ပြုလုပ်လျှက်ရှိသော စာဟောဆရာများသည်လောကအကျိုးသယ်ပိုးသယောင်ပြု၍ထာဝရသခင်၏ဂုဏ်တော် နိမ့်ပါးအောင် ပြုလုပ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
၂၁။ အခြားဘာသာအား နှိမ့်ချ၍ မိမိဘာသာအား ဂုဏ်တက်စေရန် ကယ်တင်ရှင်ကိုးကွယ်ခြင်းသည်အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်သည် (Rev ပိုင်စိုးပြော)၊ အကျင့်တရားသည် အကျိုးမရှိဟု တစ်ဖက်သတ်ယုံကြည်ခြင်းသာ ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံသို့လည်းကောင်း၊ ပရတိသုခဘုံသို့လည်းကောင်း ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခြင်းသည် ဘာသာရေးအချုပ်ထောင်ဟု (ဦးကံထူးပြော) ဧကောဗုဒ္ဓေါ၊ ကညာမာရိ (S ဂွန်အောင်ပြော) သင်္ခါရမှ အစဉ်ထာဝရသို့ (ဒေါက်တာ တင်မောင်ထွန်းပြော) စသည်ဖြင့် ပါဠိစာများဖြင့် ဟောပြောကြ၍ သူတစ်ပါးဘာသာစကားနှင့် လိမ်လည်ရောနှောအသုံးပြုသော စာဟောဆရာခေါင်းဆောင်များအား အရေးယူပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
၂၂။ ယင်တစ်ကောင်၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှု အဆုံးတရားသေခြင်း (Rev ပိုင်စိုးပြော)၊ လှေတစ်စင်းဖြင့် ရေကူးသင် ကယ်တင်ရှင်အစစ်သည် ရေနစ်သူကို လှေပေါ်တင် (ဦးကံထူးပြော) စသည်ဖြင့် ငါအမှန်သူအမှား
ပုတ်ခတ်စော်ကားမှုတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ ဆရာတော်သံဃာတော်များအား လွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်စေပြီး ဤကဲ့သို့သောဘာသာရေးမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ပြုမူပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေမှုများအား အရေးယူခြင်း၊ အပြစ်ပေးခြင်း၊ ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းစသော သာသနာညီညွတ်ရေးကို ရှေးရှု၍ ဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးမူအရ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် လေးစားစွာ တင်ပြတောင်းခံအပ်ပါသည်။
၂၃။ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာတွင် ရောက်ရှိနေသော မယုံကြည်သူများအား ပစ်မှတ်ထား သားမွေးမှု၊တပည့်မွေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဘဝပေးအခြေအနေအရ မိသားစုအတွက် နိုင်ငံတကာတွင် ရောက်ရှိနေသော မယုံကြည်သူ (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ) သည် ဆင်းရဲပင်ပန်း အားငယ်နေကြပြီးငယ်ရွယ်သောဘဝအတွက် ရုန်းကန်နေရသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအသိအမြင် အားနည်းခြင်း၊ နိုင်ငံခြားတွင် အားကိုးရှာအကာအကွယ်ယူလိုခြင်း၊ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ ပေးကမ်းလျှင် မြိုးမြိုးမြက်မြက် ရရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
၂၄။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်မှုကင်းလွတ်သော နိုင်ငံခြားတွင် နိုင်ငံတော်အား စော်ကားခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပုတ်ခတ်ခြင်းတို့ဖြင့် စည်းရုံးနေသူများအား ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ထာဝရယုတ်မာနေကြမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အမြန်ဆုံး အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တင်ပြတိုင်ကြားအပ်ပါသည်။
(က) စော်ကားပုတ်ခတ်သူများအား အရေးယူပေးနိုင်ပါရန်၊
(ခ) ကျမ်းစာများတွင် ဗုဒ္ဓပါဠိစာသားများ ပယ်နှုတ်ပေးနိုင်ပါရန်၊
(ဂ) ပါဠိသက်မြန်မာစာစကားဖြစ်သည့် ဘုရား၊ နိဗ္ဗာန်၊ ငရဲ၊ ဥပုသ်၊သမ္မာ၊ရဟန္တာဟူသောစသည့်ပါဠိသက်မြန်မာစကားလုံးများအား အခြားဘာသာကျမ်းများ၌အသုံးပြုခြင်း လုံးဝခွင့်မပြုပါရန်။
၂၆။ သက်သေခံအဖြစ် အများကြီးရှိနေပါသော်လည်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သော (က) S ဂွန်အောင်၏ ဟောပြောမှုအား ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ရှင်းတမ်းအခွေ၊ (ခ) S ဂွန်အောင်၏ဟောပြောမှုမူရင်းခွေ၊ (ဂ) Rev ပိုင်စိုး၏ ပြောချင်လွန်လွန်းလို့ပါအခွေ၊ ဦးကံထူး၏ ဘာသာတရားလား၊ သမ္မာတရားလားနှင့် S ဂွန်အောင်တို့၏ ပိုင်းခြားတင်ပြမှုအခွေ၊ (ဃ) S ဂွန်အောင်၏ ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခွေ၊ (င) Rev ပိုင်စိုး၏ ကံ ကံ၏အကျိုးဓမ္မဆွေးနွေးခြင်း ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရည်ကျောင်းအခွေ၊ (စ) သက်ကြီးခရစ်ယာန်ဆရာများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုအခွေ၊ (ဆ) မြန်မာခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအခွေတို့ဖြင့် ပူးတွဲတင်ပြအသိပေး တိုင်ကြားအပ်ပါသည်။
ဖုန်း - ဝ၉ ၅ဝ၇၄၆၄၅၊ ဝ၉ ၄၁၉၉၈၃၁ဝ၊
ဝ၉ ၅၃၄၄ဝ၂၂၊ ဝ၉ ၅ဝ၁၁၉၆၈၊
ဝ၉ ၄၂၁ဝ၂၁ဝ၈ဝ၊ ဝ၉ ၅၄၁၄၂၅၉။
၁။ ဦးသူရရွှေမန်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်။
၂။ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်။
၃။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်။ ၄။ သူရဦးမြင့်မောင်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်။
၅။ ဦးမြင့်ဆွေ၊ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၆။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၊ မဟာနာယကကျောင်းတော်ကြီး၊
၇။ အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၊
မဟာနာယကကျောင်းတော်ကြီး၊ ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၊ ရန်ကုန်မြို့။
၈။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ထေရဝါဒသြဝါဒဆရာတော်အဖွဲ့၊ တောင်တန်းသာသနာပြု၊
၉။ နာယကချုပ်၊ သာသနာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၁၀။ နာယကချုပ်၊ သာသနာတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးမြို့။
၁၁။ ဥက္ကဋ္ဌ၊ သာသနာ့နုဂ္ဂဟအသင်း၊ ဇမ္ဗူသီရိကျောင်းတော်ကြီး၊ ကမ္ဘာအေး။
၁၂။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အထူးစုံစမ်းရေးဦးစီးဌာန။
၁၃။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန။
၁၄။ သံအမတ်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး။
၁၅။ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ၊ လှည်းတန်း၊ ရန်ကုန်။
Posted: 09 Sep 2012 05:59 AM PDT
Inilah dia lambang atau logo UMNO yang sebenarnya. Lebih baik kita pilih syaitan yang kita kenal daripada malaikat yang kita tidak kenal.
Bukan saya kata, Dr Mahathir yang kata. Setiap hari kita baca: A'uzubillahiminasyaitanirrajim. Aku berlindung dari syaitan yang kena rejam. Kita mohon lindung dari UMNO rupa2 nya.
Lihat sahajalah apa yang telah berlaku pada Nizar di Perak. Dia jadi MB sebab ehsan DAP. Lepas tu DAP control dia. Dasar yang dia jalan ditentukan oleh DAP. Nizar telah memberi banyak tanah kepada orang Cina. Habis lah orang Melayu. Kalau PR memerintah, DAP lah yang menguasai segala nya.
Cuba awak fikir, saya meneruskan. Setiap6orang Melayu, seoarang adalah ahli UMNO. Mati Melayu UMNO, ada5lagi orang Melayu. Kalau UMNO mati, orang Melayu mati atau tidak?
Kecuali pemimpin Melayu terdiri dari orang bodoh seperti pemimpin UMNO. Bukan saya yang kata, tapi Dr Mahathir yang kata. Pemimpin UMNO kata Dr Mahathir terdiri dari half past six. Orang Pahang kata, tak semenggah. Kemudian, kata Dr Mahathir, pemimpin UMNO semua rasuah dari bawah sampai atas. Sudah tentu ungkapan sampai atas termasuklah Dato Najib. Mahathir sudah tentu tahu segala rahsia semua menteri2 yang berkerja dibawah nya dahulu. Dan seperti kata Tun Daim- bagaimana kita mahu mengawal dan membenteras rasuah, kalau fulus sudah sampai ke nombor satu.
Jadi 0-0 lah. Awak pijak gambar pemimpin pembangkang, maka ada orang pijak gambar Najib dan Rosmah. -sakmongkol
Posted: 09 Sep 2012 03:30 AM PDT
Each day arrives like an empty box, waiting to be filled.
We can pack the box with treasures, or load it down with ballast.
Many things we put in by habit, without thinking, just because it is easy and comfortable.
Sometimes there's little room for anything else.
If you were to open today's boxayear from now, what things of true and lasting value would you find?
Would you be able to distinguish today's box from all the rest?
Once the box for today is packed, that's it. You can't take anything out, nor put anything else back in.
Once the day is done, the treasures you could have had are either yours or they are not.
Yet tomorrow dawns early, another box that's empty while at the same time full.....of possibilities.
Each day comes fresh. Make them all special.
Stuff them full of life and living.
Receive the treasures that can be yours.
Posted: 09 Sep 2012 02:39 AM PDT
Obviously, this isapost-Ramadan posting. ;)
Hardly eat at Subway.
Nevertheless, during Ramadan, went to Subway SS2 at least twice because of the 'Subway Ramadan Meal' promotion.
Chicken Teriyaki for me...
Mushroom soup for him...
One free drink for he and I.
SHAH ALAM - Angkatan Muda Keadilan (AMK) menafikan salah seorang pengawal peribadi Ketua Umumnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengacukan pistolnya ke arah orang ramai ketika insiden menghalang bas PKR Jelajah Merdeka Rakyat di Jasin, Melaka semalam.
Ketuanya, Shamsul Iskandar Mohd Akin berkata, pengawal yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan Anwar tidak mengacukan senjata tersebut ke arah orang ramai sebagaimana dilaporkan beberapa media hari ini.
"Sebaliknya, apa yang dilakukan adalah mengeluarkan senjata api dan menghalakan muncung pistol ke tanah, di bawah paras pinggang," kata beliau yang juga Ketua PKR Jasin.
Tambah beliau, tindakan yang dilakukan oleh pengawal terbabit mengikut Prosedur Operasi Standard (SOP), yang akan dilakukan oleh mana-mana pengawal keselamatan untuk memberi amaran kepada orang ramai supaya beredar dan tiada gangguan ke atas pihak yang dijaganya, dalam kes ini Anwar.
"Apa yang saya dengar daripada pengawal terbabit, dia berkata kepada semua orang ramai untuk bersurai dan jangan ada yang menggangu," tambah beliau.
Sebaik sahaja kejadian terbabit, beberapa anggota polis yang berpakaian preman menyerbu ke arah pengawal terbabit dan merampas senjata itu daripada lelaki tersebut, ujar Shamsul Iskandar.
Tambah beliau, satu laporan polis akan dibuat mengenai perkara tersebut hari ini.
Sinar Harian Online difahamkan pengawal keselamatan telah diambil keterangan semalam dan dilepaskan malam tadi.
Laporan media hari ini menyebut polis menahan lelaki yang ditugaskan untuk mengawal Anwar selepas mengacukan senjata api ke arah orang ramai di Kampung Baru Rim, Jasin petang semalam.
Dalam kejadian jam 3.15 petang, lelaki berusia 37 tahun, yang menaiki Toyota Camry, dipercayai berang dan keluar dari kenderaan sebelum mengacukan pistol selepas sekumpulan lelaki cuba menghalang bas dinaiki Anwar ke satu majlis di kampung tersebut.
Siasatan polis menunjukkan senjata api itu milik syarikat keselamatan dan pegawai terbabit dibenarkan membawanya ketika bertugas. -SH
Laporan polis berhubung insiden itu sudah dibuat Radin Shamsulkamar pada jam 8.43 malam di balai polis sama. -KD
Posted: 09 Sep 2012 12:27 AM PDT
Posted: 09 Sep 2012 12:24 AM PDT
Brad Johnson was one of the first gamers in the world to reach level 80 in Guild Wars 2. Along his journeys, he took extra care to note all of the best questing routes and skill rotations. Once he perfected his methods, he wrote them all down in one easy to use, comprehensive guide. Frustrated gamers rejoice - Brad Johnson's guide is the real deal. Brad's guide will teach you
"Just how can I remove Herpes?" is an inquiry everyone inquires when they have an episode. Formally there is no treatment for HSV, therefore alleviation slips back to either preventative procedures or means of minimizing the episodes. You are able to acquire Herpes via lovemaking or alsoatiny cut on your skin when somebody with an episode of Herpes brushes from you. HSV2isasickness
Posted: 09 Sep 2012 12:16 AM PDT
Many companies with traveling employees provide computers for them to take on the road. Each computer has its own individualized password, and often times the traveling employee is left without any options when they have been given the wrong login information. The Unlock My Password Software Program was developed asasimple, effective solution, asaway to overcome the impossible
Crafting is an intrinsic aspect of the Guild Wars2experience. Although it initially appears to function similarly to other MMO crafting systems, it ends up being significantly deeper and potentially more rewarding. There are eight crafting disciplines, many of which will prove familiar to gamers who have played other MMOs. Of these eight disciplines, only two can be active at one
If you sit and read the articles posted all over the internet, you will come to the conclusion that Guild Wars2isagame that is laid in its entirety from the start. It doesn't need you to get toacertain level to do something, (well, only the dungeons, maybe, but getting them all at level 1 would just get you stomped so you really need that extra training). If you want to PvP right
Guild Wars2utilizesahighly structured, comprehensive achievement system. These days gamers expect their favorite titles to come stocked withamyriad of achievements. Adding an extra layer of depth to games, players enjoy the additional replay value achievements afford. Whereas most games only implement uninspired, unrewarding achievements, the Guild Wars2achievement system is
"Exactly how can I do away with Herpes?" is an inquiry everyone inquires when they have an episode. Formally there is no remedy for HSV, therefore alleviation slips back to either preventative steps or methods of decreasing the episodes. You are able to have Herpes via lovemaking or alsoatiny cut on your skin when an individual with an episode of Herpes brushes from you. HSV2is an
Posted: 09 Sep 2012 12:15 AM PDT
Computers have these days become the platform where everyone does and stores all their business. You probably have hundreds of crucial files in your computer that you can never afford to lose. But what happens when you return from holiday to find out that you have forgotten your password? There's no way you are going to tell your boss that you can't submit the finance report simply
If Guild Wars2isn't your first MMORPG, you should know by now that crafting isagreat way to get some items early on, but that's about it. In terms of leveling, it doesn't help you at all and you are practically wasting time to get some better items so you can save some time by killing the monsters quickly. So there is an equal tradeoff where you don't actually gain anything in terms